DAAWO-Madaxweyne Siciid Deni,”Xalka doorashada Soomaaliya waa in Farmajo loo caqli celiyaa”.
April 8, 2021 Xuseen 7
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa ka hadlay fashilka ku yimid shirkii Afisiyooni, isaga oo mas’uuliyadisa ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siciid Cabdullaahi Deni oo sheegay in shirkii jaraa’id ee wasiir Cismaan Abuukar Dubbe uu ahaa mid horay loo sii duubay isla markanaa ay Villa Somalia sii qorshaysay wax walba oo la xiriira fashilka shirkii ka socdey Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaya ayaa sheegay in markii laysku fahmi waayey shirkii uga socdey Afisyoone, ay codsadeen in wadatashi la isugu laabto, ayna madaxweynaha ka sugayeen jawaab waafi ah haseyeeshee ay arkeen warsaxaafadeedkii wasiirka oo la wareejinayo baraha bulshada.
“Waxaa layaab leh maanta oo dhan waa shireynay, dhowr maalmood ka horna waa shireynay waxaase cadaatay qoraalka iyo muuqaalka ay sii deysay dowladda uu ahaa mid horay u diyaarsanaa, Wasiirka [Dubbe] maanta hadlay dabcan wuu nala joogay dharka uu watay iyo kii codka ku qabtay kii uu watay maaha, wax sii diyaarsanaa oo loogu tala galay in ummadda Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo, ayuu yiri” Madaxweyne Deni.
Dabaal Deni,”Xalka doorashada Soomaaliya waa in Farmajo loo caqli celiyaa”.kkkkkkk adigoo tolkayaga sheegad ku ah zanjibar la qarameeyay ah. miyaad u aqli celin cid kaaga sareysa hogaaminta dalka Somalia.kkkkkk Ilaa amar dambe xerada safaradaha shiishiiye ee xalane ku siijir waayo waxaad awalba aheyd QOWSAARKA QASWADAHA UJOOGA EMARITE KA WADANKA SOMALIA.
“Waan sii joogeynaa, waana joogeynaa, waana fileynaa in dib la’isugu soo laabto, tana ma’aha mid lagu kala tegi doono,” ayuu yiri wasiir Timo-Cadde.kkkkkk walee dadkii raga ismooday xaar ayaa ka socda. ALOW CABDULAHI YUUSUF U NAXARIISO .
Puntlander, Deni bay kaga dhegtey. Tolow muxuu yeelay waa yaabe. Waar maydiin kala dabqaadnaa si leydiin heshiisiiyo kolley waxbaa jiro e.
Dani mahan qof caadi warkiisa
Nagaxira isimada puntland
Bay utaalaa masiirka puntland
In aay dani ushagan
Runta jubaland dowlada intabadan gacanta ku hayso
South west hirshabale galmudug banadir dowaladii
Fadaralka waa isku mooqif
Hadhow eed mafiicna reer
Puntlandnow qabta dani
M askar says:
@maxamed ali aniga nin reer nugaaleed ayan ahay dani waa madaxweynahayga sharafta mudan ee adiga ayaa lagusoo qabanayaa hadad nin rag tahay is cadee
Waxaa la ogyahey in:-
a- Ismaqiiqe farmaajo uu ka soo cararey shirkii Dhuusamareeb oo socda.
b- Ismaqiiqe farmaajo uu diidanaa shirka Afisyoone, caga jeedna uu ku yimid.
c- Ismaqiiqe farmaajo uu isku dayey marar badan inuu shirka fashiliyo,
d- Ismaqiiqe farmaajo uu la yimid xukoouon iyo marmar siyo uu ku donayo in shirka la hakiyo ama la badlo sida uu u socdo.
e- Ismaqiiqe farmaajo uu u direy Qoor Qoor ka dib uu ka baqey inuu isbadallo.
f- Ismaqiiqe farmaajo uu wararco iyo nak nax uu la dhex joogey.
g- Ismaqiiqe farmaajo uu hadba colour/ waji cusub uu la imaanayey shirka.
h- Ismaqiiqe farmaajo uu qarsan waayey tuhunka uu ka qabey KOOXDIISA oo handadaad joogta uu haye.
Intaa iyo ka badan oo dhaqanta Ismaqiiqe farmaajo ayaa si dhow looks socdey.
Sidaa darteed lama yaabin dhuusaadiisa durbada iyo dhaqanka ciyaal nimada ah.
Maxaa ka dhalan kara waalidaa iyo fudeydkaa lagu bartey ? Wax uu ka shalaayo,
Sheekado waxey u taal.
* Beesha lixaad.
* Beesha Hawiyo.